🥇 ▷ Marka waxaad badali kartaa keyboard-ka caadiga ah taleefannada Huawei ✅
Marka waxaad badali kartaa keyboard-ka caadiga ah taleefannada Huawei
Furaha ayaa ah mid ka mid ah dhinacyada taleefanka casriga ee aan si wanaagsan ula falgalin karno. Waxaan u isticmaalnaa maalin kasta dhowr jeer oo haddii aanaan helin keyboard sax ah, khibrada ayaa noqon karta musiibo. Maanta waxaan kuu sheegayaa sida ay tahay Badal furaha nambarrada Huawei isla markaana tirtiraa ikhtiyaarka ay shirkadda Shiinaha na siiso wax aan caadi ahayn oo had iyo jeer isticmaalayaashu aysan jecleysan.
Haddii aad ku qorto WhatsApp, aad u dirto emayl ama aad dhex marto webka, furaha ayaa ah aasaaska aasaasiga ah. Iyada oo ku xidhan nooca Android iyo lakabyada hagaajinta, khibradda ayaa si weyn ugu kala duwanaan kara hal guur ilaa mid kale. Huawei waxay iskaashi la yeelatay shirkadda Swiftkey, oo ah shirkad ku taal London oo in muddo ah tixgelinaysay Mid ka mid ah furayaasha ugu fiican ee loogu talagalay Android. Si kastaba ha noqotee, isticmaaleyaal badan ayaa doorbida inay rakibto ikhtiyaarkooda.
Kaliya hal ikhtiyaar caadi ah
Ikhtiyaarka in lagu beddelo keyboard-ka taleefanka Huawei wuxuu ku dhex jiraa nidaamka nidaamka adoo galaya “Luqadda iyo Galitaanka Qoraalka” xulashada. Markaan gudaha ku jirno, waan arki doonnaa sida furaha Swiftkey waa ikhtiyaarka lagu calaamadeeyay sida caadiga ah. Arinta yaabka leh ee isticmaaleyasha badan ayaa ah inaysan dooran karin ikhtiyaar kale, xitaa xita mashiinka Google, sidaa darteed, waa inaad u tagtaa codsi dhinac saddexaad ah oo aad ku beddelatid keyboard-ka.
Soo dejiso keyboard kale
Waxa jira xulashooyin kala duwan oo aan tiro lahayn oo kaladuwan oo ku saabsan iibka codsiyada Android, laakiin tusaale u noqon kara tababbarkan yar, waxaan dooranay furaha Google, kaas oo loogu talagalay adeegsadayaasha badan doorashadooda ay jecel yihiin oo leh xulashooyin badan. Si aan awood ugu yeelano inaan baddelo keyboard-ka taleefanka Huawei waxaan marka hore ubaahanahay inaan kala soo baxno badhanka Google, lagana soo xiriiro xiriirkeena hoose.
Ka dajiso Google Keyboard ka Google Play
Sida loo dhigo furaha cusub
Mar haddii la soo dejisto, dalabka ayaa nagu hagta talaabo talaabo ee habka loo dejiyo keyboard ahaan habka ugu weyn ee wax loo qoro. Laakiin haddii aannan dooneynin inaan sameyno tallaabooyinkaas ama aan dooneynno inaan mar dambe uga tagno, waxaan u tagi karnaa liiska hore ee “Luqadda iyo Galitaanka” si loogu doorto furaha cusub sida caadiga ah.
Tan darteed waa inaan calaameynaa ikhtiyaarka halka uu magaca ka muuqdo, kiiskan Google Gboard-ka, iyo sidoo kale waxaan calaameyn doonaa doorashada ugu sareysa sidaa darteed furaha cusub waa midka aan ku adeegsan doonno tabta aan caadiga ahayn. Qaabkaan waxaan ku heli doonnaa furaha cusub ee lagu hagaajiyay mobiladeena Huawei.